Yakasanganiswa silica / quartz girazi hwindo
Kona Cube prism
650nm yakamanikana bhendi firita
850nm yakamanikana bhendi firita
940nm yakamanikana bandpass firita
LP 420nm firita
LP 450nm firita
LP 470nm firita
LP 550nm firita
LP 630nm firita
LP 780nm firita
Ipfupi kupfuura firita
470nm ipfupi kupfuura firita
550nm pfupi kupfuura firita
900nm ipfupi kupfuura firita
Ndedzipi nzira dzenzira dzekubhadhara dzaunogamuchira?
Isu garandi zvinhu zvedu uye nekushanda. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune garandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese
Hongu, isu tinogara tichishandisa mhando yepamusoro kutumira kunze. Isu tinoshandisawo hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakasimbiswa inotonhorera yekuchengetedza vafambi kune tembiricha inonzwisisika zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwezve muripo.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express inowanzo kuve inokurumidza asi zvakare inodhura nzira. Nekufamba mugungwa ndiyo mhinduro yakanakisa yemari hombe. Mitengo yekutakura chaiyo tinogona kukupa chete kana isu tichiziva iwo huwandu hwehuremu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.